क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि « Janata Samachar
क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रकाशित मिति : 31 May, 2020 6:24 am
काठमाडौं । क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका दैलेख दुल्लु नगरपालिका–११ का ३५ वर्षीय युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनको शनिबार बिहान जिल्लाको दुल्लु–७ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भवनमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको हो ।
उनी शनिबार बिहान ७ बजे ढलेर बेहोस भएका उनको केहीबेरमै मृत्यु भएको दुल्लु अस्पतालले जनाएको छ । उनको मृत्यु भएपछि गरिएको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको अस्पतालकी प्रमुख डा. पूजा बिसीले बताइन् । ‘मृत्यु भएपछि स्वाब संकलन गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएका थियौँ ।
कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट आएको छ,’ डा. बिसीले भनिन् । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ । उनी १० दिनअघि भारतबाट आएका थिए । भारतबाट आएका ७९ जनासँगै उनलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।